वीर अस्पताललाई २५ सय शय्याको बनाइने | | Nepali Health
वीर अस्पताललाई २५ सय शय्याको बनाइने
२०७३ जेठ २४ गते ७:४० मा प्रकाशित
बनाइने योजनामा रहेको बीरको नौ तले भवन
काठमाडौँ, २४ जेठ – चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रय प्रतिष्ठान (न्याम्स)अन्तर्गतको वीर अस्पताल दश वर्षभित्र दुई हजार पाँच सय शय्याको बन्ने भएको छ ।
अहिले अस्पताल रहेको क्षेत्रमा एक हजार तीन सय शय्यासहितको सुविधासम्पन्न वीर केन्द्रीय सिटी अस्पताल र दुई सय शय्याको अत्याधुनिक ट्रमा सेन्टर गरी एक हजार पाँच सय शय्या पुर्‍याउने तयारी सरकारको छ ।
पाँच सय रोपनी जग्गामा थप एक हजार शय्या थपेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक अस्पताल बनाउने घोषणा सरकारले बजेटमार्फत गरिसकेको छ ।
पुरातत्त्व विभागको अवरोध
नौतले नयाँ भवन यसैबर्षदेखि बनाउन शुरु गर्ने सरकारको योजना छ । तर, पुराना संरचनामध्ये एउटा भवन ऐतिहासिक महत्वको रहेको भन्दै पुरातत्त्व विभागले भत्काउन दिएको छैन ।
वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षअगाडिको हरियो झ्याल भएको भवन राणाकालमा बनेको ऐतिहासिक भवन भएको भन्दै विभागले भत्काउन मानेको छैन । ऐतिहासिक भवन भत्काउन विभागको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिनुपर्छ । सिफारिस नपाँउदा भत्काउन ढिलाइ भएको हो।
त्यही ठाउँमा नयाँ भवन
नौ तल भवन तयार भइसकेपछि बीर अस्पतालको हालको मुख्य भवन भत्काएर ६ ५० सैयाको अत्याधुनिक अस्पताल निर्माण गर्ने योजना न्याम्सको छ । २३ रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने सो भवन कति तलाको हुने भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।
नौतले भवनमा नर्सिङ
कलेज वीर अस्पताल अगाडिको न्याम्सअन्तर्गतको नर्सिङ क्याम्पस र चिकित्सक, कर्मचारी बस्दै आएको आवासीय भवन भत्काएर सोही स्थानमा अन्डरग्राउन्डसहित भवन बनाउने तयारी भएको छ । १७ रोपनी पाँच आना क्षेत्रफलमा बन्ने सो भवनमा ६ सय ५० बेडको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न अस्पताल हुनेछ ।
दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना रहेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सका प्राडा. गणेश गुरुङले बताए । ‘यसै वर्ष त्यहाँका भवन भत्काएर काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘काम सुरु गरेको दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ ।’ भवन निर्माण गर्न यस वर्ष सात करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अन्डरग्राउन्डको पहिलो तलामा अस्पताललाई चाहिने ठूला इक्युप्मेन्ट र क्यान्सर विभाग रहनेछ । न्याम्सले तयार पारेको योजनाअनुसार अन्डरग्राउन्डको दोस्रो तलामा पूरै पार्किङ हुनेछ । भुइँ तलामा रेडियोलोजी विभाग, पहिलो तलामा शल्यक्रिया कक्ष, दोस्रो तलामा आइसियू र पोस्ट अपरेटिभ वार्ड रहनेछ । भवनको तेस्रोदेखि छैटौँ तलासम्म विभिन्न वार्डका शय्या रहनेछन् ।
हजार बेडको अत्याधुनिक अस्पताल
वीरलाई हजार शय्याको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक अस्पताल बनाउन विस्तृत अध्ययन हुँदै छ । दश अर्ब लागतमा पाँच सय रोपनीमा फैलिने अस्पतालसँगै न्याम्सको मुख्यालय, नर्सिङ क्याम्पसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुने उपकुलपति प्रा।डा। गणेश गुरुङले बताए । ६ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ ।
भारत र चीन दुवैको चासो
सरकारले मेघा प्रोजेक्टका रूपमा लिएको वीर अस्पताललाई अत्याधुनिक बनाउने योजनामा सघाउन चीन र भारत दुवै देशले चासो देखाएका छन् । ‘दुवै देशबाट प्रस्ताव आउँदा कसको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने भन्ने अप्ठ्यारो भएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
महिलाहरुमा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सर के हो ? कसरी जोगिने ?